Technolojiyada: Whatsapp oo soo saareeysa adeeg kuu fuududeynaya in aad ku istcmaasho laba mobile markiiba! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Technolojiyada: Whatsapp oo soo saareeysa adeeg kuu fuududeynaya in aad ku istcmaasho...
Technolojiyada: Whatsapp oo soo saareeysa adeeg kuu fuududeynaya in aad ku istcmaasho laba mobile markiiba!
USA (Halqaran.com) – Dadka adeegsada Whatsapp ayaa muddo badan dalbanayey in loogu soo daro barnaamijkan adeeg u ogolaanaya in cinwaankood Whatsappka ay ku istcmaali karaan 2 mobile markiiba , balse shirkadda ayaa muddo dheer hakad u gelineysay Dark Mode ( shaashadda mugdiga ah ) oo uu barnaamijkan u qaabeysnaa.
Laakiin hadda waxa ay u muuqataa in shirkadda Whatsapp ay u bedeleyso qaab caadi ah oo aan aheyn shaashadda madow , sida ay sheegtay shirkaddu.
WaBetaInfo oo ah bogga taageerayaasha Whatsapp ayaa soo qoray in la horumariyay barnaamika lagu sheekeysto ee Whatsapp laguna soo kordhiyay in cinwaankaaga Whatsapp-ka aad ku adeegsan karto 2 aalad ama 2 mobile markiiba.
Barnaamijkaan ayaa u qaabeysan sida Whatsappka caadiga oo ah end-to-end encrypted oo loola jeedo (farriimaha ayaa wadaagayaan 2 da qof aysan u muuqan Karin cid kale oo ay tahay mid aamin ah oo qarsoon).
Sidoo kale, bogga WaBetaInfo ayaa lagu xusay in marka uu dhammeystirmo adeeggan cusub ay shirkaddu markiiba ay shaaca ka qaadi doonto adeeg kale oo ah Ipad Version, oo kuu suura-gelinaya in aad ku istcmaasho Ipad iyo Iphone isla wakhtigaas.
adeega cusub ee Whatsappka
Dadka adeegsada Whatsapp